FIANARANA TENY ANGLISY: Ahafahana mivelatra amin’ny sehatra isan-karazany.
Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire sept 3, 2017
Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an’ny fianarana teny anglisy ao amin’ny English Tutoring of Madagascar. Natokana ho an’ireo mpianatra manana diplaoma bakalorea ny fidirana amin’ny 11 sy ny 25 septambra 2017.
MINISTERAN’NY RAHARAHAM-BAHINY: Nohamafisina ny fiarahamiasa amin’ny sinoa sy ny japoney.
Mpiara-miombona antoka lehibe miara-miasa amin’ny firenena Malagasy i Chine sy Japon. Ho an’ny firenena sinoa, efa 45 taona ny fiaraha-miasa ara-diplomatika tamin’i Madagasikara. Ho fanamafisana izany, nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana an’Andriamatoa Ministry ny raharaham-bahiny, Henry RABARY –NJAKA ny Ambasadaoron’ny Chine, miasa eto an-toerana ny alarobia 31 aogositra 2017.